(L) အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၂၀ နှစ်ကြားရှိယောက်ျားလေးငါးပုံတစ်ပုံသည်အရှေ့လန်ဒန်တက္ကသိုလ်သို့ပြောကြားရာတွင်သူတို့က“ လိင်မှုကိစ္စကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်အနေဖြင့်ညစ်ညမ်းမှုအပေါ်မှီခိုနေရသည်” (16) - Your Brain On Porn
ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများသည် 'အလွန်အမင်း' ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းလျှောက်ပြီးကူညီလိုကြသည်
16 နှင့် 20 နှစ်ကြားယောက်ျားလေးတစ်ပဉ္စမသူတို့ "စစ်မှန်သောလိင်များအတွက်လှုံ့ဆော်အဖြစ် porn အပေါ်မှီခို" ခဲ့ကြသည်အရှေ့လန်ဒန်တက္ကသိုလ်သို့ပြောသည်။
အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်လေ့လာမှု 177 ကျောင်းသားများကိုစစ်တမ်းကောက်ယူနှင့်ယောက်ျားလေးများရာခိုင်နှုန်း 97 porn ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သူတို့၏အမျိုးအရာခိုင်နှုန်း 23 ရာခိုင်နှုန်း 13 သူတို့စောင့်ကြည့်အကြောင်းအရာ " ပို. ပို. လွန်ကဲဖြစ်လာသည်" ဖြစ်ပါတယ်အစီရင်ခံတင်ပြနေချိန်မှာသူတို့က, ကစောင့်ကြည့်ရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်မပေးနိုင်ဟုပြောသည်။
အဆိုပါသုတေသနတစ်ခု NSPCC လေ့လာမှုအပြီးလာက The Daily Telegraph သတင်းစာရဲ့အားဖြင့်ပြန်တမ်း, ကျောင်းကျောင်းသားတစ်ဦးကိုတတိယအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းလူငယ်များတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ပြုမူရန်ရှိသည်ဘယ်လိုဆိုထားသည်ယုံကြည်ပြသခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်လကစတင်ခဲ့သောကြေးနန်း Wonder အမျိုးသမီးများနေ့ သာ. ကောင်း၏လိင်ပညာပေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု, ကလေးတွေအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်မသင့်လျော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသို့ဖိအားများနှင့်ခေတ်မီခံရဖို့ကျောင်းများတွင်လိင်ပညာရေးကိုခေါ်လျက်ရှိသည်ကိုဘယ်လိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။
အဆိုပါသုတေသနရီးရဲလ်လိင်များအတွက် Channel ကို4ရဲ့ကင်ပိန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, 30pm မှာတနင်္လာနေ့ 10th စက်တင်ဘာလအပေါ်ဦးနှောက်အပေါ်တစ်ဦး Channel ကို4မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် Porn အပေါ်မိတ်ဆက်ပြသပါလိမ့်မည်။
ကြေးနန်း Wonder အမျိုးသမီးများ 21st ရာစုသို့လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးပညာရေးကိုရောက်စေဖို့ဒေးဗစ်ကင်မရွန်တိုက်တွန်း, ပိုကောင်းတဲ့လိင်ပညာရေးမဲဆွယ်နေပါတယ်။ change.org/bettersexeducation မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသနားခံစာမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] @TeleWonderWomen, Twitter ကို #bettersexeducation အပေါ်ကင်ပိန်းကိုလိုက်နာပါ